It is me. Ko Niknayman.: ဆရာတော် အရှင်ဦးကောဝိဒ ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ “အဆိုးဆုံးရောဂါကို ကုစားပါ” တရားတော်။
ဆရာတော် အရှင်ဦးကောဝိဒ ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ “အဆိုးဆုံးရောဂါကို ကုစားပါ” တရားတော်။
တရားတော်အား download လုပ်နိုင်ပါပြီ။
Posted by Ko Niknayman at 11:27 PM